Think Different » အလင်းပြပေးကြပါ အရပ်ကတို့…	50
Posted by Yae Myae Tha Ninn on Jul 25, 2016 in Think Different | 50 comments
-ပြီးတော့ သူကြီးရဲ့ အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်းပေါ့…(http://mandalaygazette.com/205709) ဆို အကြိုက်ဆုံးပဲ… ဒါတွေကတော့ မပျောက်ပါဘူး… အဲဒီပို့စ်ထဲက ဆရာနဲ့ တပည့် ဆက်ဆံရေးလေးကို ရေးထားတာ အရမ်းသဘောကျတယ်… အဲဒီပို့စ်တုန်းကလဲ သိပ်ဆွေးနွေးထားတာ မတွေ့ရဘူး… တကယ်ဆို သွေဖီတယ်လေ… အနော်ဦးဆုံး မန့်ထားတာ မှတ်မှတ်ရရပဲ… -ဒီခေတ် (ဖွဘုတ်) ခေတ်မှာပေါ့ လူတွေ စာဖတ်ရတာ တွေးရတာ ကြိုက်လာကြပါတယ်… ဥပမာ နည်းစနစ်ကျကျ အတွေးအခေါ်တို့ မှတ်စုကြမ်းတို့ မြန်မာလီဒါတို့ ဖြိုးသုတတို့ ဖတ်လာကြပါပြီ… တခုပဲ အကြောင်းအရာပေါ်မှာ ထပ်ဆင့်တွေးတာ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ နှိုင်းပြတာ မမန့်ကြဘူးလားလို့… တကယ်ကောင်းတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဆိုလဲ လိုရင် တမျိုး မလိုရင် တမျိုးလားလို့… မန့်ကြတာ ပြောပါတယ်… တကယ်ကောင်းရင်ရော သူက ဘယ်သူဘယ်ဝါ (နောက်ကွယ်မှာ သူ့အကြောင်းရှိသေးတယ်လေ) မသိဘူး…
ကျွန်တော် တကယ်ကို လက်ရှိစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးပါ… မြန်မာတွေ အများစု ကျွန်တော်ပါပါတယ် သာယာနေသလားလို့… အပြင်မှာလဲ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်… တယောက်တမျိုးစီတွေ ထွက်ပါတယ်… ကိစ်စမရှိပါဘူး… နောက်ထပ်တွေးစရာ စဉ်းစားစရာ ထပ်ရတာပေါ့… ကူပါဦးနော်… ရေမြေ့သနင်း
ဂျက်စပဲရိုး says: စဉ်းစားရမှာက ကိုယ့် အခု အခြေအနေ ကို ကိုယ် ကျေနပ် သလား ကိုယ့် အတွက် အဆင်ပြေနေသလားပေါ့။
ဂျက်စပဲရိုး says: The day the earth stood still ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာ
မမချွိ says: နာ့ နွားတော့ ချောက်ထဲ လာမတွန်းချဂျနဲ့နော်။
Yae Myae Tha Ninn says: ဂျက်ရေ… ပွင့်လင်းပေးတာ ကျေးဇူးနော်… အောက်ဆုံးက အကြောင်းမှာ လက်ရှိဗမာစိတ်ဓာတ်လေး တွေ့လိုက်ရတယ် ဟီး… ကိုယ်လဲ အပါအ၀င်ပါ … အကို့မှာ ကြွေးသစ်လေးတွေ ထပ်ရောက်လာတာရယ်… ကြွေးဟောင်းတွေကလဲ အိုပြီး နာလာမှာရယ်ကို တွေးလိုက်တော့ ဇုန်ထဲက ခုန်မလားလို့ပေါ့… Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ပထမ ပင်ပန်းတယ်… အဆင်မပြေရင် ဒါနဲ့ ဆုံးချင်ဆုံးသွားမယ်… သို့သော် တနေ့တော့ အောင်ပွဲတွေ့မယ် ထင်ပါတယ်… ဒါဆို သက်သာဖူးတာလေး ပြန်ခံစားရမယ် ထင်ပါတယ်… အသီးအပွင့်ကတော့ နဂိုထက် သာမယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်… ကိုယ်ဘာလိုလဲဆိုတာက ရေရှည်လိုအပ်ချက်မှာ နဂိုထက် တော်တော်သာမှ ရမယ်ဆိုရင်တော့ ခုန်ဖို့သင့်တယ် ထင်ပါ့… မမချွိ… အကြံလေးတွေ ထပ်ပေးဦးနော်… မမချွိ ရဲ့ နွားကို ချောက်ထဲ တွန်းဖို့ နေနေသာသာ ကိုယ့်နွားလေးတောင် ကြောက်ဒူးတုန်နေလို့ အားဆေး လာယူကြည့်တာ… ဟီး…
Yae Myae Tha Ninn says: ဆိုကြပါစို့… လက်ရှိမှာတော့ ကုမ်ပဏီတွေမှာ ရာထူးတိုးမှပဲ လစာက တော်တော်များများ တိုးတယ်… ရာထူးမတိုးဘူးဆိုရင် ပုံမှန်တိုးမယ်… ကုန်ဈေးနှုန်းက ကိုယ်တိုးတာထက် ပိုရှေ့ပြေးနေမယ်… ရာထူးကလဲ တိုးစရာကုန်ပြီ… ကိုယ်တွေကလဲ အသက်ထပ်ကြီးလာမယ်… ပါးစပ်ပေါက်တိုးလာမယ်… တခြားကုမ်ပဏီသွားလဲ သိပ်မထူးဘူး… ဒါဆို လိုင်းချိန်းမလား… လက်ရှိကို ကျေနပ်တယ်နော်… ရေရှည်မှာကျတော့ အိုလာတယ် စုမိဆောင်းမိမရှိဘူး… ဒါဆို ဇုန်ထဲ အေးဆေးနေကြမလား… မြန်မာပြည်အနေနဲ့ကို ပိုပြီး အကြံပေးပါနော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့ဒါ ကျေနပ်နေရမယ့် အခြေအနေ မဟုတ်တော့ဘူး ကွီး :P
ဒင်း ကို ပေါ်ပြီး အရင်းအနှီး လုပ်စားဖို့တောင် ကောင်းနေပြီ။ :P :P :P
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါဆို ဂျက်ရေ… အဲဒီနွားပေါ်စားပြီး မကုန်မချင်းမှိန်းနေဦးမယ် သဘောရှိတယ်… ဒါကုန်မှ ဂျက်ပြောသလို မလုပ်လို့ မဖြစ်တော့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပြီး ထ လုပ်မှာ… Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: Professor Barnhardt: There must be alternatives. You must have some technology that could solve our problem.
မြစပဲရိုး says: နင်းနင်း ကို အကြံပု ရရင် အခုလက်ရှိ Confort Zone က နေ Stretch zone ထဲ ကို အရင် ရအောင်သွားပါ။
Ma Ei says: .အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပါလို့ အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပျစီ….
Yae Myae Tha Ninn says: အခုလို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မအိ…
ကျွန်တော်လဲ ပြတ်သားချင်ပေမဲ့ မပြတ်သားလို့ လူမိုက်လာရှာတာပါ… :P မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် အလုပ်ဆိုရင်တော့ ဂျက်ပြောသလို အချိန်ထိမစောင့်တော့တာ ပိုကောင်းမယ်…
ကလေး ယူဖို့တုန်းကလဲ ၀ိုင်းတိုက်တွန်းလိုက်တော့ ယူဖြစ်သွားတယ်… တကယ်တော့ ယူဖို့ စဉ်းစားနေတာပါ… အားပေးမယ့်သူရှိတော့ လုပ်ရဲသွားတယ်… ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက တကယ်တော့ မလုပ်ရဲတာထက် လုပ်ပြီးမှ လူအပြစ်တင်ခံရမှာကို ပိုကြောက်နေသလားပေါ့… အနီးဆုံး အိမ်ထောင်ဖက် သို့မဟုတ် မိဘ အကြံယူလိုက်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်သား များလာရင် လုပ်ရဲလာမလားပေါ့… ဒါဆို တကယ်လို့ ခုန်မိရင်တောင် ကြုံမယ့် ပြသာနာကို ရင်ဆိုင်နိုင်လာမှာပါ… ကြာတာ မြန်တာပဲ ရှိမယ် အချိန်တန်ရင်တော့ မမချွိကို ပြောသလို သက်သာမယ့် နောက်တချိန်ရောက်လာမှာပါ… အဲလိုပဲ ကျွန်တော်လဲ အားမွေးနေပါတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: ဒီမိန်းမ ကွာပလိုက်ပါတော့ နင်းနင်းရယ် တိုက်တွန်းဒါဘာာာာ ဟိဟိ :-)
Yae Myae Tha Ninn says: ငင့် ဆိုင်ဘူးလားလို့ ဂျက်… မိန်းမ နဲ့ Comfort Zone နဲ့… Zone ထဲ ထည့်ချင်သပါ့ဆိုရင် ဒါလေးက Essence Zone လေးပါ… LoL..
မြစပဲရိုး says: ရွာ ထဲ မယ် သိပ်ပြီး ဆူဆူပူပူ မလုပ်ရတာကြာလေတော့ ဒီ မှာ ဝင်ပြီး သောင်းကျန်းဦးမှပါလေ။ Thanks Ninn Ninn. :-)))
(သများ တွေကို ပြောတိုင်း ပြောသူ လုပ်သည် မဟုတ် ဆိုသည် ကို သိကြပါလော့၊ အပြောက လွယ်သကိုး) :D :-)))
Yae Myae Tha Ninn says: တကယ်တော့ ဒီပို့စ်မှာ ကျွန်တော်က ခုန်ထွက်ချင်တာ မှန်ပေမယ့် တိုးတက်ချင်လို့ ခုန်တာထက် ရှေ့ရေးကို စဉ်းစားပြီး ဖြစ်သင့်တယ်ထင်လို့ ခုန်ဖို့ကြိုးစားတာဗျ… အခြေအနေတခုကို ပြောင်းဖို့ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော၊ မှီခိုနေတဲ့ မိသားစု၊ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေ မျှဝေပေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အပေါင်းအသင်းတွေကလဲ အရေးကြီးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ဒါတွေပြီးရင်တော့ လယ်ဗယ် တခုချင်းစီရဲ့ သဘောတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ဖြစ်နိုင်၏ မဖြစ်နိုင်၏ ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ…
kai says: လစ်ဘရယ်နဲ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေးပုံခြင်းတူမှာမဟုတ်..။
မြစပဲရိုး says: အစောက နင်းနင်း ကို ပြောတဲ့
ခိုးမှု ရော သတ်မှု ရော ဆိုတော့ နှစ်ပြန်ကြော်ကျွပ်ကျွပ်လေး တောင် ဖြစ်မလားဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: သူကြီးရေ အစိမ်း ၂ခါ ပြလို့ ရအောင် လုပ်ပေးပါလားဗျာ… သူကြီးပြောတာကို အရမ်းသဘောကျတာ အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ ပို့စ်ပြီးရင် ဒီတခါ မန့်တာပေါ့… ဟုတ်တယ်ဗျ… တွေးပုံမတူရင် လုပ်ပုံလဲ တူမှာမဟုတ်ဘူး… ခက်တာက ကိုယ်က ဘယ်လိုလူစားလဲ သိဖို့ အရင်လို့ ထင်မိတာပဲ… လေတိုက်တိုင်း ယိမ်းပြီး တကယ်တမ်း ခုန်မိပြီးမှ ခံနိုင်ရည် မရှိရင်တော့ မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်ပြီး အခြေအနေ ပိုဆိုးသွားမှာပဲ… ဟီး… အဲတော့မှ လူတွေက သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်းဟဲ့ဆိုပြီး အားကြီး လက်ခုပ်တီးကြမှာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: လိုရင်းကို အတည် ပြောရရင်
ဒီလို အဆင့်ကျော်တာဟာ ကံယုံလို့ အကာအကွယ်မဲ့ ဆူးပုံနင်းခိုင်းသလိုပါ လို့ပြောရင်၊ ကိုယ့်လက်က လွတ် ပလွတ် ဆိုတဲ့ အကြံ လို့ ပြောရင် သူကြီးမင်း ဘာပြောမည်နည်း။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: အရီးပြောသွားတာလေးကို အရမ်းသဘောကျမိပါတယ်… ဇုန်ထဲက ထွက်မယ် ဟေ့ဆိုရင်လဲ… ဘာမှ မကြည့်တော့ဘူး အချိန်တန်ရင် အောင်မြင်မှု ရမယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ်… ရမယ်လို့လဲ ထင်ပါသေးတယ်… သို့သော် အခြေအနေ အချိန်အခါ ပြီးရင် အကြောင်းတရား ရှိသေးတာကို ရုတ်တရက်မေ့သွားတယ်ဗျ… အသုံးများတာလဲ Time & Situation ပဲ အသုံးများကြတာလေ… တကယ်တော့ ဘာသာမှာ အကြောင်းတရား ပါ သင်ထားတာ မေ့နေကြတယ်… တကယ်လို့သာ အကြောင်းမလှခဲ့ရင် …. ဟူးးးးး ကျေးဇူးပါဗျာ… Case & Effect ကို သိဖို့ အရီးပြောသလို တရားထိုင် ပုတီးစိပ်ပြီး Concentration ယူ… ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်လာမှ Confidence တည်ဆောက်ပြီး တဆင့်ချင်းစီကို ဥာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီး ထိုးဖောက်သွားရင် တနေ့ ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ Comfort Zone ကို ထပ်ရောက်သွားမယ်လို့ အတွေးပေါက်မိပါတယ်… အရီး… လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1081
sorrow says: Seven digit business လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အမြင်နဲ့ပြောရရင် …Beyond the ivy hill, there’s alwaysahigher hill တဲ့ဗျ..ရပ်မနေပဲ.. နွားသတ်ပစ်ဖို့ပဲ အားပေးတယ်.. တရားထိုင်..ပုတီးစိတ်နေတုန်း…ကမ္ဘာကြီးကပြောင်းသွားရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်မတုန်း…
မြစပဲရိုး says: သူဌေး ဆိုတာ ဝန်ထမ်းကောင်း အောက်ခြေက နေ ဖြစ်တာ တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ပိုမြင့် တဲ့ တောင် ကို ရောက်ဖို့ အတွက် ရှိပြီး တောင် ကို ဖြို ခိုင်း တဲ့ ပညာရှိများ မရှိဘူးလား မောင်စော? :D :-)))
Yae Myae Tha Ninn says: ကိုစောရေ… သူဌေးဆိုတာ သင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးရထားတဲ့သူ မှန်ပါတယ်… သို့သော် အမြဲတမ်း အမြတ်မရှိသမို့ ကိုယ့်ပိုက်ပိုက်နဲ့ အတွေ့အကြုံရရင် မဟန်ဘူးဗျ… တနည်း ၀န်ထမ်းဆိုတာ သူများ ပိုက်ပိုက်နဲ့ အတွေ့အကြုံ ဖရီးရတဲ့ သူတွေဗျ… ဟီး… တွေးနည်း နောက်တမျိုး နဲ့ ပုံစံနောက်တမျိုးအတွက်တော့ ၀ဲကမ်းလ်ပါခင်ဗျာ… ဒီဆိုက်က အော်သာ တော်တော်များများက ၀န်ထမ်းလို့ ထင်မိလို့ပါ…
မခုန်ဘူးတော့ မပြောဘူးနော်… အရီးပြောသလို ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဟာတွေ ကြိုတွက် ကိုယ့် ခံနိုင်ရည်ပါအပါပေါ့… အဲအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ဖို့ တကယ်တော့ ဟုတ်ပါတယ် အားလုံး ကိုယ့်အပေါ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အပေါ်မှာ မူတည်တာပါ… ကိုယ့်ဘာသာပြတ်သားဖို့ စိတ်တည်ငြိမ်စူးစိုက်မှုရအောင် တရားထိုင်တာလဲ မမှားဘူးလို့ ထင်ပါတယ်… ဒါမှ နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် သုခမိန်ဖြစ်မှာမဟုတ်လား… တခါမှားပြီးရင် တခါပြန်စဖို့ အချိန်ကို တော်တော်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာ သူငယ်ချင်းကို လက်ရှိအားပေးခဲ့ရလို့ တော်တော်ကို နားလည်သလို သံဝေဂရသလို ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့လဲ ကြိုးစားရဦးမယ်ဗျာ…
လာဆွေးနွေးလို့ ကျေးကျေးပါ… Was this answer helpful?LikeDislike 1081
sorrow says: အရီးလေး ..နှင်းနှင်းအနေနဲ့ .အခုလိုတွေးမိပြီဆိုကတဲ့က သူအတော်တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိလာတာခင်ဗျ .ရဲရင့်တဲ့အတွေးအခေါ်ရှိလာပေမယ့် မပြတ်သားသေးတာ။.. ဆိုလိုတာက ၀န်ထမ်းဘ၀မှာ သိပ်မကြာတော့ဘူးဆိုတော့သဘောပဲ .. လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလေးနှစ်က ကျော်ဖြစ်နေ ခံစားနေရသလိုတစ်ထပ်ထဲပဲခင်ဗျ… လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်က ကျောပိုးအိတ်ထဲ အ၀တ်အစားလေးစုံလောက်နဲ့ ငွေသုံးသောင်းလောက်နဲ့ ..ရန်ကုန်ကိုဆင်းလာတဲ့ မလယ်မ၀ယ် ကချင် တစ်ယောက်ထက်တော့ သူ့မှာ ရေခံမြေခံများကြီးသာတယ်ခင်ဗျ ..မန်နေဂျာ..Operation Manager နဲ့ General Manager လုပ်သက် ၁၂ နှစ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံ(​ဟယ်လီကော်ပတာမပါ ) ဒေါ်လာငါးထောင်နဲ့လုပ်ငန်းတခုစလိုက်တာမို့ .သူ့ကိုလဲ. ဖြစ်စေချင်ပါတယ် အရီးလေးရယ် ။ လူဆိုတာရွေးချယ်စရာရှိရင်ေ၇ွးချယ်မိတဲ့သဘောခင်ဗျ…ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့လမ်းထဲကိုအရင်ဝင်တိုးဖို့ပဲလိုတယ်လို့ ထင်မိကြောင်း..
မြစပဲရိုး says: မောင်စော စေတနာကိုလဲ သိပါတယ်။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဇုံ မျိုးစုံဝင်ထွက်ခဲ့ဖူးပါပြီ…အဲ့အတွေ့အကြုံအရပြောရရင်…အပေါ်က ကိုဂျက်ပြောပြသလို
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: Comfort zone ထဲနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတတ်ပညာကို ရောက်ရာနေရာမှာ
Yae Myae Tha Ninn says: အဲမှာ နည်းနည်း လည်နေတယ် ဦးမိုက်ရေ… တချို့ကတော့ ကိုယ်နဲ့ဆက်စပ်မှုတော့ ရှိတယ် သို့သော် လိုင်းပြောင်းသွားတာကို ဇုန်ခုန်တယ် ပြောတယ်… အခု ဂျက် နဲ့ ဦးမိုက် အထင်က ဒီလိုင်းပေါ်မှာပဲ ထပ်တက်လို့ရတာကို မတက်ပဲ မျောနေတာကို လို့ထင်တယ်.. အရီး ကူရမယ် ထင်တယ်… ဟီး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ကျော်လွင်ဖြိုး says: ရှင်းပါတယ် ဗျ။
uncle gyi says: ရွာထဲဒီလိုလှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်မဖြစ်တာကြာပေါ့.
Yae Myae Tha Ninn says: အရီးပြောသလို Streatch Zone ပြီးရင် Risk Zone အဆင့်ဆင့် ဖြတ်နိုင်ဖို့ ကိုယ်စွမ်းမလား သေချာ သုံးသပ်… ဒါမျိုးကို အာရုံစူးစိုက်မှု ရအောင် တရားထိုင် စိတ်တည်ငြိမ်မှု ရမှာတွေ လုပ်… ဒါဆိုရင် ပြောင်းသင့် မပြောင်းသင့် ဆုံးဖြတ်လို့ရပြီထင်ပါတယ်… အန်ကယ်ကြီးရေ… ၀င်ရောက်ပါဝင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Thint Aye Yeik says: ဒီလို ပိုစ့်ကောင်းလေးတွေ ပြန် ဖတ်ရပြီဆိုမှတော့
Yae Myae Tha Ninn says: ဒီပုံပြင်လေးက အရီးပြောသလို တရုတ်ပုံပြင်လေးဆိုတော့… ဂဟေဆော်တဲ့ဟာနဲ့ သတ်မယ်ထင်တယ်ဗျ… ဟီး… တော်တော် တောက်မြင်ကပ်သွားတယ်… အဲမူဗီကြည့်လိုက်တုန်းက…
ဘယ်လိုသတ်သတ်ပါ သေသွားရင်ပဲ သူတို့မိသားစု ဇုန်က ကျော်ဖို့ ဖြစ်သွားပြီလေ… ပုံပြင်ထဲမယ် ပြောပါတယ်… ပို့စ်ကောင်းတွေ ပျောက်တဲ့အထဲမယ် ဆက်ဆက်တို့ တာဝန်လဲ မကင်းဘူးနော်… စတာပါ… စတာပါ… :P
kai says: နွားကိုချောက်ထဲတွန်းချရင်.. နွားကမသေပဲ… ကျိုးပဲ့ပြီး..အော်နေမှဖြစ်.. ကြားသူအကုန်..စိတ်မချမ်းမသာ… မငြိမ်းချမ်းဖြစ်ကုန်ပါမယ်..။
ပြီးမှ.. စား.. လိုက်… ကြ… ပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: တဂျီးလဲ… ဦးကြောင်ပြောလဲ ပြောချင်စရာပဲ လည်လှီးဖို့ကို စိတ်သန်နေတယ်… :P
Yae Myae Tha Ninn says: “လူဆိုတာရွေးချယ်စရာရှိရင်ေ၇ွးချယ်မိတဲ့သဘောခင်ဗျ…ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့လမ်းထဲကိုအရင်ဝင်တိုးဖို့ပဲလိုတယ်လို့ ထင်မိကြောင်း..” အဲဒါလေးကို သိပ်မရှင်းဘူးဗျ… နည်းနည်း ပြန်ရှင်းပေးပါလား… ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ လမ်းထဲဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ… ကိုစောရဲ့… လင်းပေးပါဦး… ပထမကတော့ ဇုန်ခုန်တာပဲဗျ… မန့်ရင်း ပြန်ဖတ်ရင်း အနုလုံ ပဋိလုံလာရာမှာ… နွားဆိုတာ တကယ်တော့ Ego ကို ပြောတာပဲဆိုတာ သဘောပေါက်လာတယ်… ကျွန်တော် တော်တော် ပိန်းတာပဲ နော်… ဟီး…
sorrow says: ..ကွယ်..အလုပ်ထွက်ပြီး. ကုန်ပဏီထောင်ပစ်ဖို့ပြောနေတာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတခုခုစလိုက်ဖို့ပြောနေတာ …ငယ်လေးရေ….ရုံးခန်းဌား.. ၀န်ထမ်းဌား..ရှိသမျှငွေ အပြင်ချေးဌားထားတာအကုန်အဲ့ထဲရောက်ပြီးမှတော့ ရွေးချယ်စရာရှိအုံးမလား ….အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ပစ်ဖို့ပဲရှိတော့တာ…
Yae Myae Tha Ninn says: ဟီး… ဇွတ်ကို တွန်းချနေတာပဲဗျ… နဂိုကတည်းကလဲ ခုန်ချဖို့ပါ… အားပေးမယ့်သူ ၀ါ လူမိုက်လိုက်ဌားနေတာ… အချိန်တော့ ယူဦးမယ်ဗျ… ကျေးဇူးပါ… မသေလောက်ပါဘူးနော့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ရေကူးနိုင်ရင်၊ အသက်ကယ်ဘော ရှိနေရင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ရင် (ကံကောင်းရင်) မသေပါဘူး။ :-)))) Was this answer helpful?LikeDislike 1081
sorrow says: အရီး​လေး​ရေ..​​ကျော်​ကအငြိမ်းစားဝန်​ထမ်းမိဘ​တွေနဲ့ တမိသားစုလုံးကို​ထောက်​ပံ့​နေရသူမို့လို့ကို ခုန်​ချတာပါ…..
Yae Myae Tha Ninn says: အရီး နဲ့ ကိုစောရေ… အကြံပေးတာထက်ကို စေတနာထားပြီး သွေးရင်းသားရင်းလို ဆွေးနွေးပေးတာကို တွေ့ရတော့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်ဗျာ… ကျန်သူများလဲ ထိုနည်းတူစွာပါ ကျေးဇူးလဲတင် ၀မ်းလဲသာပါတယ်ဗျာ…
နောက် ၃ ၄ နှစ်ထိလဲ မလောက်မှာ မကြောက်ရသေးတော့ အချိန်ယူ အရှိန်ယူလို့ ရဦးမယ် ထင်ပါတယ် (သင်တန်းတက်ဖို့ ဇုန်ကခုန်ဖို့)… ပြီးမှ အဲအချိန် ရာထူးတိုး လစာတိုးမှာနဲ့ဆို ကလေးထပ်တိုးရင်လဲ ခံနိုင်ရည်ရှိလောက်ပါပြီ… အမွေကတော့ ကလေးကို ပညာအမွေပေါ့… ဒီပို့စ်ကနေ ရလာဒ်က လိုင်းကူးအခုန်ကနေ လိုင်းတူ အရွေ့(အခုန်) ကို ရွေးဖြစ်သွားတာပဲ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အားလုံးအားလုံးကို…. အခုန်တခုတော့ ကျန်တယ်… ဒါကတော့ မလုပ်ဖြစ်ဖို့ များသွားပါပြီ… ဇုန်ထဲပဲ ထားလိုက်ပါတော့မယ်… အဟဲ ဒါက ငွေတိုးချထားတာကို ကားဝယ်ဖို့ အခုန်ပါ(ခိုင်းစားဖို့ နောက်ထပ် အင်ကမ်းအတွက်ပါ)… တော်ပြီ ခုနက ခေတ်အခြေအနေကြည့်ထားမိလိုက်တော့ ဟန်ဘူးဗျ… ဒါကတော့ လုံးဝ ပုံမှန်နို့ညှစ်တာပဲ ကောင်းတယ်… အိုင်တီသမားဆိုတော့ Back Up ထားရမှ စိတ်ချတတ်တာလေ…
နောက်ဆုံးတခုကတော့ နောက် တပတ်လောက်ဆိုရင် ဒီပို့စ်ကို ကျွန်တော် Summary ထုတ်ချင်တယ်… အရီးကူပေးပါနော်… တယောက်ချင်းစီ အမြင်ကိုမှ ဘယ်လို ချိန်ထိုး လုပ်သင့်တယ်… ဘယ်လို အချိန်မျိုးမှာဆိုတာလေးကိုပေါ့… ကူပါဦးနော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: What- If Annalysis လေးကို ပို့စ်အနေဲ့ တင်ပေးပါလားဗျာ… သိသူများ ကျေးဇူးပြုပြီး… ဘူမှ မတင်ရင် အရီးတင်ပေးနော်… တင်တတ်သလိုသာ တင်… ဟီး… ပုံတိုပတ်စလေးနဲ့ဆို ပိုကြိုက်မိမှာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: တကယ်တော့ ဒီလို ရှိတယ် နင်းနင်း ရဲ့။
သို့ပေမဲ့ သူတို့ဆီက ပညာ တွေ ကို လုပ်ငန်းရှင်တွေ က ဘာလို့ လိုလဲ ဆိုတာက တော့ နောက်ထပ် ကဏ္ဍ တစ်ခု ဖြစ်သွားတာမို့ ထားတော့။ အရီး ရဲ့ နှစ်ဖက် ဘိုးဘွား တွေ က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကုန်သည် ပွဲစား ပွဲရုံလုပ်ငန်း စီးပွါးရေးသမား တွေ ဆိုပါတော့။
အောင်မြင်ပါစေ။ PS – သီအိုရီ သမား အရီး ထက် လက် တွေ့သမား မောင်စော ကို ပိုပြီး ဆရာတင် ပါ။
sorrow says: ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်/တတ်တယ် ဆိုတာ သူ့ဟာသူ ဗီဇ သွေးထဲ ကကို ပါလာတာများလားလို့။ ဟုတ်​တယ်​ အရီး​လေးရယ်​..သိပ်​​ကောင်းတဲ့အချက်​ကို​ထောက်​ပြလိုက်​တာပါပဲ…​ကျော်​.​စေတနာစကားမို့​လောသွားတယ်​. ​ကျော်​က လွန်​ခဲ့တဲ့ဆယ့်​ခုနှစ်​ နှစ်​ကတဲက ပြင်​ဆင်​ခဲ့တာ …အသက်​ ၂၀ မှာမန်​​နေဂျာ .အသက်​ ၂၅မှာ operation manager အသက်​ ၂၈မှာ GM အသက်​၃၅ မှာလုပ်​ငန်းရှင်​ ဖြစ်ရမယ်​ဆိုတဲ့ စိတ်​နဲကြိုးစားခဲ့တာ…ဆို​တော့ကာ နှင်းနှင်းအ​နေနဲ့ ပြင်​ဆင်ချိန်​ လုံ​လောက်​ရဲ့လားဆိုတာနဲ့ ဗီဇနဲ့တကယ်​ဖြစ်​ချင်​ရဲ့လားဆိုတာ​လေး ပြန်​စဉ်းစား​စေချင်​တယ်​ …
Yae Myae Tha Ninn says: ကိုစောရေ… ကျွန်တော်ကတော့ ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်း နဲ့ မျိုးဆက်ကို အဆင့်မြှင့်ပေးရမယ့် တာဝန်ရှိနေတော့ အကျိုးအမြတ်ကိုပဲ ကြည့်ဖြစ်တယ်ဗျာ… ဒါကြောင့်လဲ ပရောဖက်ရှင် မရှိသေးတာ ပါမယ်… တနေ့တော့ တွေ့မယ် ထင်မိပါတယ်… မတွေ့လဲ သားလေးကို ကျွန်တော့်ထက် ပညာပိုတတ်အောင် ပရော်ဖက်ရှင် နဲ့ သူ့ဝါသနာ တထပ်တည်းကျအောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင် နောက်တဆင့်မြှင့်နိုင်ပြီဆိုပြီး ဟင်းချ နိုင်မှာပါ… အကျိုးအမြတ်ကြည့်ရတာကလဲ သားလေးသင်မယ့် ပညာရွှေအိုးက အဖိုးကြီးနေလို့ပါ… စိတ်ရှည်လက်ရှည်ကို စေတနာထားပေးတာ ကျေးဇူး တကယ်တင်ပါတယ်ဗျာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ကျွန်တော့်မိဘတွေလဲ အရင်က ကုန်သည်တွေပါ… ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းတက်ချင်တယ်လို့ ပူဆာလို့ ရန်ကုန်ရောက်လာတာပါ… တနည်း ပန်ကာအောက်မှာ အလုပ်လုပ်တာကို မြင်ချင်လို့ပါ… ကျွန်တော်က မြိတ်သားပါ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ရင် ကျိန်းသေ ချမ်းသာမှာပါ… မိဘတွေကို မေးဖူးပါတယ်… သား အဲဒါတွေ ပြန်လုပ်ရမလားဆိုတော့ ဒါဆို မင်းကို ဒီမှာ ကျောင်းလာမထားဘူးတဲ့… နောက်တခုက အရင်က ကုန်သည်ဆိုတာက အစိုးရအလုပ်မလုပ်ချင်လို့ လုပ်ကြတာပါ… ကုမဏီတွေဆိုတာ အခုမှ ခေတ်စားလာတာပါ… ဒါက မိဘတွေ ကုန်သည် ဖြစ်ခြင်း အကြောင်းပါ… တခြား ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ အိုင်တီလိုင်းပဲ ကျွမ်းတော့ အဲဒါက စီးပွားသိပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ… ဘီယာ ဆေးလိပ်ကျတော့လဲ ထပ်ပြီး ခွင့်မပြုတဲ့အထဲပါတော့… နည်းနည်းရင်း များများမြတ် ဒါမှမဟုတ် ဗီဇသွေးထဲက ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကတော့ ရေလုပ်ငန်းပဲ ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်လဲ အိုင်တီပဲ လုပ်နေရတာပါခင်ဗျာ…
အရီးကို ကျွန်တော် အင်ဗိုင်ထားပါတယ်… အရီး လက်မခံထားလို့ပါ… ၂ နှစ်လောက်ရှိတော့မယ်… ဟီး… muli.htut ဆိုတာ ကျွန်တော်ပါပဲ… မေးစရာတွေတော့ အများကြီးရှိပါတယ်… အချိန်ရရင် ပြန်ဖြေပေးပါနော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: လောလောဆယ် ကိုယ်တိုင် comfort zone ထဲက ရုန်းထွက်နေတယ်.. အဘွားရော. အဖေရော..အမေရော.. ဒီအတိုင်းလေးပဲ နေတတ်ခဲ့ကြတော့.. ကိုယ်တိုင်ကလည်း စွန့်စားဖို့ကို သိပ်နှောင့်နေးခဲ့တာ.. ကိုယ့်ရဲ့ status quo လေး တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် ကိုယ့်ကို မှီခိုနေတဲ့ ကိုယ့်မိသားစုလည်း ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တာကိုး… နောက်ဆုံးတော့ change ဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာကို အတင်းဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တယ်.. ပြင်ဆင်မှုတွေတော့ ကြိုလုပ်ရတာပေါ့လေ…အခုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ကြိုးစားနေတယ်… အမေကို ပြန်ကြည့်တဲ့ငါ ဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလေ ဆိုပြီး စိတ်အားတင်းထားရင်းနဲ့ပေါ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: အဓိကစိုးရိမ်တာလဲ အဲဒါပဲ… ကိုယ်ကပြောင်းလိုက်လို့ အိုကေရင် ကိစမရှိဘူး… မဟုတ်ရင် မှီခိုနေတဲ့ မိသားစုလေး ယိမ်းယိုင်သွားမှာ… ဒါပေမဲ့ အလုပ်တခုကလဲ တကယ်ကို ၄ ၅ နှစ်အပြင် ပိုလုပ်လို့မကောင်းဘူး(လခစား) ပြောပါတယ်… နောက်ကုမဏီကို ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ ပြောင်းနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ… သေချာတာတခုက မိဘကို လုပ်ကျွေးတဲ့ သားသမီးက ဘယ်တော့မှ ဘေးမတွေ့ပါဘူး… အကိုလဲ လက်ရှိလက်ခံကျင်သုံးနေပါတယ်… မွန်မွန်ရေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.